Saturday June 16, 2018 - 22:15:20 in Wararka by Super Admin
Kulan ay albaabada u xirnaayeen oo ay wada qaateen ayaa ugu dambeyntii laga soo saaray 16 qodob oo intooda badan iska ahaa kuwa ay mar walba warbaahinta ka sheegi jireen iyo qaar boor isku qaris ah oo la doonayo in shacabka looga mashquuliyo boobka lagu hayaao dhulka iyo Kheyraadka Soomaaliya. qodobka 7-aad ee heshiiska oo si cad u sheegaya in Itoobiya qaadanayso afar Dekedood oo muhiim ah.
waxaa layiri 7-daan qodob ayay ku heshiiyeen labada dhinac
Inkastoo aanan heshiiska lagu xusin magacyada afarta Dekedood ayaa waxay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay xaqiijinayaan in Dekedaha Itoobiya loo saxiixay ay kala yihiin 1- Kismaayo 2-Baraawe 3- Hobyo 4- iyo Deked la doonayo in laga dhiso deegaan xeebta ku teedsan oo katirsan Sh/dhexe.
Heshiiska ayaa waxa kale oo lagu adkeeyay qorshe ah in la isku dhafo wasiirrada Itoobiya iyo kuwa Dowladda Farmaajo iyo in shacabka labada dhinac ay ka faa’iideystaan maalgashiga Dekedaha, taas oo micnaheedu yahay in Dekedaha dalka ay ka shaqeystaan Xabahida iyadoo aan ognahay in Turkidu ay 5000 (shan kun) oo muruq-maal ah ka cayriyeen Dekedda magaalada Muqdisho.
Marka si fiican loo akhriyo waxa ku qoran Heshiiska ayaa ah in Itoobiya ay qaadaneyso qeyb kamid ah dekadaha dalka Soomaaliya balse si diblumaasiyadeysan ayaa loo yiri "waa in labada dal maalgashadaan afar dekadood"!, sidoo kale dowladda Farmaajo waxay si maldahan uga tanaasushay diidmadeedi aheyd in Itoobiya ay saami dhan 19% ka qaadato dekadda weyn ee magaalada Berbera.
Heshiiskan maanta Muqdisho lagu saxiixay waxaa gadaal ka riixaysa dowladda Imaaraatka Carabta oo madaxdeedu maalmihii lasoo dhaafay ay booqanayeen Itoobiya sidoo kale ajandayaashiisa waxaa horay Addis Ababa kusoo dajiyay xasan Cali Kheyre,wasiirka ammaanka iyo Fahad Yaasiin.
Dalku wuxuu noqday Xaraash iyo xoolo Jaban, waxaana iminka muuqanaya in loo gacan galinayo Itoobiya oo horey inooga heysatay dhulkii awooweyaasheen oo ay ugu dambeeyeen Hawd iyo Soomaaligalbeed, halka ciidamadooduna sannadihii u dambeeyay qabsadeen degaano iyo magaalooyin hor leh oo ka tirsan Soomaaliya.
Markii R/wasaaraha Itoobiya uu soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waddooyinka lagu xardhay calamada xabashida sida isgoyska KM4 illaa iyo Sayidka oo ay ka lalmanayeen calamada gummeysiga.